Cayaartoy Reer Iran Ah Oo Qabsaday Indhaha Dunida Kaddib Dhacdo Ku Cusub Ciyaaraha Oo Uu Sameeyey | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cayaartoy Reer Iran Ah Oo Qabsaday Indhaha Dunida Kaddib Dhacdo Ku Cusub Ciyaaraha Oo Uu Sameeyey
Published on June 21, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(22-6-2018) Dunida kubadda cagta oo dhan ayaa mar kaliya indhahooda u jeediyey laacib ka tirsan xulka qaranka Iran oo lagu magacaabo Milad Mohammadi, kaas oo bandhig ku cusub ciyaaraha ka sameeyey dhamaadka ciyaartii ay Spain 1-0 dirqi ah kaga adkaatay waddanka Iran.
Spain ayaa guusheedii ugu horreysay ee Koobka Adduunka Arbacadii ka gaadhay Iran, waxaanay yeelatay afar dhibcood oo ay kula simantay Portugal oo 1-0 ku jiidhay Morocco, waxaase kaalinta saddexaad fadhiya dalka Iran oo iyaguna kulankoodii koowaad saddex dhibcood ka qaatay Morocco, hase yeeshee gool barbar-dhac ah oo ay Spain ka dhaliyeen laga diiday markii uu laacibka Saeid Ezatolahi oo goolka dhaliyey uu Offside sii galay intii aanay kubaddu u imanin.
Iran bandhig fiican oo rajo geliyey Muslimiinta Shiicada ayay soo bandhigtay halka Muslimiintii Sunniga ahayd ee Saudi Arabia, Morocco iyo Masar ay hadheen, haddana waxa jirtay dhacdo kale oo ka baxsan rajadooda iyo ciyaartii ay kala hortageen Spain, taas oo ahayd in wiilka difaaca bidix ee Milad Mohammadi uu daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta isaga oo tuuraya kubbad uu qalaama-rogod sameeyey.
Arrintan ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada iyo falan-qeeyeyaashii ciyaaraha ee telefishannada fadhiyey.
Mohammedi ayaa kubadda kasoo qaatay bannaanka, kaddibna dib u baxay inta uu kubadda dhunkaday, halkaas oo dhawr tallaabo markii uu hore usoo qaaday uu qalaama-rogod sameeyey si uu kubadda u gaadhsiin karo ciyaaryahannada joogay goolka Spain horteeda maadaama ay u baahnaayeen gool barbar-dhac ah wakhtiguna gabaabsi ahaa.
Inkasta oo aanu kubadda sidaas ku tuurin oo uu joojiyey, si caad ahna ugu dhiibay ciyaartoy ku dhowaa, haddana warbaahhinta BBC Radio 5 LIVE, oo ciyaarta tebinaysay si weyn uga faallootay.
Chris Sutton oo layaab ay ku ahayd waxa uu Mohammedi sameeyey ayaa yidhi: “Tani waa goolkii, waa fursaddii Iran”
Alistair Bruce-Bill ayaa isaguna markii uu arkay Mohammadi oo isasoo rogaya, waxa uu ku tiraabay: “30 ilbidhiqsi ayaa u hadhay Iran. Milad Mohammadi ayaa tuuryo dheer ganaya. Kow, laba, saddex, afar, shan, lix reer Iran oo shaadh cas ayaa goolka hortiisa ku sugan.”
Burce-Ball oo hadalkiisa sii wata, ayaa yidhi: “Mohammadi kubadda ayuu dhunkaday waxaanu tilmaamay cirka. Allah, muxuu samaynayaa.?”
Khabiirka Sutton oo agfadhiyey ayaa qosol isxajin kari waayey, hase yeeshee Burce-Ball ayaa mar kale tibaaxay in garsooraha ciyaartu uu ka joojiyey inuu tuuro kubaddii uu isla soo qalaama-rogay.
Baraha bulshada ee Twitter-ka ayaa sidoo kale lagu qalan-qeeyey dhacdadan cajiibka ah, taas oo haddii uu garsooraha ciyaartu ogolaan lahaa ay suurtogal ahaan lahayd inuu tuuryo dheer ku geyn lahaa goolka Spain hortiisa oo ay sababi kari lahayd goolka barbar-dhaca.